[18+] How Much Do You Love Me? (2005) – Channel Myanmar 26 October 2005 (France)
18+ 2005 1h 35min Adult, Comedy, Drama, Romance
IMDB: 5.7/10 6,444 votes
Baptiste Roussillon, Bernard Campan, François Rollin, Gérard Depardieu, Jean Barney, Jean Dell, Jean-Pierre Darroussin, Monica Bellucci, Sara Forestier, Valérie Karsenti
ပုရိသအပေါင်းတို့ အကြိမ်ကြိမ်ကြွေခဲ့ရသော Malena ဇာတ်ကားထဲက မမကြီး Monica Bellucci ကို အမှတ်ရကြဦးမလား….
ဒီဇာတ်ကားမှာလဲ မမကြီးဟာ ကျွန်တော်တို့ကို အကြိမ်ကြိမ်ထပ်ခြွေဦးမှပြါ…သိဘို့။
မမရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေက ပြင်းရှတဲ့ နှစ်ချို့ဝိုင်တစ်ခွက်လို …။
ဖရန်ဆွာ့ဇ်ဟာ ဟာ အထီးကျန်ဘဝနဲ့ သူ့ရဲ့ ပျင်းရိစရာ ရုပ်အလုပ်တို့ကို ငြီးငွေ့နေတဲ့ ပြင်သစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ ဘားတစ်ခုကိုသွားရင်း လှပတဲ့ မိန်းမပျက်ကလေးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒင်နီယယ်လာ နဲ့ ဆုံခဲ့တယ်။ မြင်မြင်ချင်း
ဒင်နီယယ်လာကိုစွဲလန်းမိရင်းက သူဟာ မီလျံချီ ထီပေါက်ထားတဲ့သူဖြစ်ကြောင်း နဲ့ သူနဲ့ အတူနေမယ်ဆိုရင် တစ်လကို ယူရို ၁၀၀.၀၀၀
ငွေမကုန်မချင်းပေးမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းလာတဲ့အခါ ဒင်နီယယ်လာကလဲ သဘောတူခဲ့တယ်။
သဘောမတူနိုင်တာကတော့ သူ့ သူငယ်ချင်းလဲဖြစ် သူ့ ဆရာဝန်လဲဖြစ်တဲ့ အန်ဒရေးပါ။ အန်ဒရေးက ဖရန်ဆွာ့ဇ်ရဲ့ နှလုံးအားနည်းရောဂါဟာ ဒီလိုလိင်မှု ကိစ္စတက်ကြွပုံမျိုးနဲ့ သင့်တော်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သတိပေးပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်မှာ ညစာစားကြရင်း ဒင်နီယယ်လာ အစာအဆိပ်သင့်သလိုဖြစ်တော့ အန်ဒရေးကို လှမ်းခေါ်ခဲ့တယ်။ အခန်းထဲမှာ နှစ်ယောက်တည်း
စမ်းသပ်နေရင်း ဒင်နီယယ်လာက အဝတ်အစားချွတ်ပေးရမလားလို့မေးတယ်။ သူက မလိုအပ်ကြောင်းပြောပေမယ့် ဒင်နီယယ်လာက
ဇွတ်အဝတ်အစားချွတ်လိုက်ချိန်မှာတော့ ရင်ဖိုလှိုက်မောစရာကောင်းလောက်အောင်လှပတဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကို မခံနိုင်တော့ပဲ..။
လူရိုးလူအေးကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဖရန်ဆွာ့ဇ်ရဲ့ ဘဝကို ဒင်နီယယ်လာ တစ်ယောက် ဘယ်လိုကမောက်ကမ ကျွမ်းထိုးမှောက်ခုံတွေဖြစ်အောင် မွှေနှောက်မလဲဆိုတာ ဆက်လက်ရှုစားကြပါ။
ဒင်နီယယ်လာ အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ကမ္ဘာအလှဆုံး အမျိုးသမီးစာရင်းအကြိမ်ကြိမ်ဝင်ခဲ့တဲ့ မမကြီး Monica Bellucci ရဲ့
မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း အလှအပတွေနဲ့ကြည့်လို့တန်စေမှာပါ။
(ဘာသာပြန်တင်ဆက်ထားသူကတော့ Alias ဖြစ်ပါတယ်။)
Baptiste Roussillon Bernard Campan François Rollin Gérard Depardieu Jean Barney Jean Dell Jean-Pierre Darroussin Monica Bellucci Sara Forestier Valérie Karsenti
Baptiste Roussillon Bernard Campan Edouard Baer Farida Rahouadj François Rollin Gérard Depardieu Jean Barney Jean Dell Jean-Pierre Darroussin Michel Vuillermoz Monica Bellucci Sara Forestier Valérie Karsenti
Option 1 usersdrive.com 999 MB BR-Rip 720p
Option2yoteshinportal.cc 999 MB BR-Rip 720p
Option3yuudrive.me 999 MB BR-Rip 720p
Option4filedwon.info 999 MB BR-Rip 720p
Option5megaup.net 999 MB BR-Rip 720p
Option6upstream.to 999 MB BR-Rip 720p
[SSNI-780]Special Yua Mikami (2021) 2021
Alter Me (2020) 2020
[21+] (WANZ-849) Black Man English Lesson Cheating Sana Matsunaga 2019
(18+)Mistress4(2021) 2021
[21+] Holy Mother, Please! Nana Ayano [XVSR-060] (2015) 2015
[21+]Moa Maeda AV Debut [MSFH-010] Uncensored Leaked
Cabin Fever(2016) 2016
[21+] All About Anna (2005) 2005
Dirty Movie (2011) 18+ 2011
[18+] Hot Girls Wanted (2015) 2015
Nurse 3D (2013) 2013